काठमाडौं (पहिचान) कार्तिक १६ – सत्य युगमा भगवान थिए । उमेरमा तलमाथि भएपनि भगवान र राक्षसको झगडा भएको सुनेर, पढेर र रामायणमा राम र रावणबीच घमासान युद्ध भएको देखेकै छ । अहिले प्रविधिले सबैलाई नजिक र टाढा बनाइरहेको छ । प्रविधिले गाउँलाई यसरी जोड्छ कि सायद कसैले त्यसको कल्पना नै गरेका हुँदैनन् ।
सबै आफैमा धनी र सम्पन्न छन् । कोही कसैको दवाव र प्रभावमा पर्नु परेको हुँदैन । टाइपशालादेखि सुरु भएको लाइफ पाठशासापछि सकिन्छ । २०७२ सालको भुकम्पमा सकिएका बुबा जस्तै २०७६ सालमा देखिएको क्यानसरले कोही नसकिउन भन्ने कामना गर्ने बाहेक अरु हामी कसैमाझ विकल्प छ जस्तो लाग्दैन ।
महाभारत र रामायणमा मात्रै होइन, श्रीस्वथानी व्रत कथामा समेत उल्लेख भएका अर्जुनका जस्ता फरासिला कुरा कसले पो गर्लान र ? शब्दलाई अक्षर बनाएर व्यक्त गर्ने क्षमता अर्जुनसँग रहेछ भन्ने कुरा महाभारत र रामायाणमा मात्रै सिमित नरहोस् भन्ने ज्ञान धेरैलाई सुनाउनु छ । त्यतिवेलाको रुप यतिवेला प्रदर्शन गर्ने उपयुक्त समय हो र ?
नेपाल र नेपाली भएर बाँच्नुको जति आनन्द संसारमा कुन देशमा पाइन्छ । एउटा छोरो अमेरिका अर्को अष्ट्रेलिया भन्ने हाँस्य टेलिश्रृखलाको जस्तो जीवन पनि धेरैको बनेको छैन । पैसालाई नै सम्पत्ती मान्नेहरुले नेपालमा २०७४ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको देवानी र फैजदारी संहिता अध्ययन गर्दा हुने सुझाव छ । नेपाल र नेपाली भएर बाँच्न नसक्ने हो भने, परिवार परिवारमा लडाई झगडा हुन्छ ।
झगडाबाट सुरु हुने कलहले एउटालाई तहन नहस पार्छ । त्यसमा रमाउने छिमेक, चिनेजाने सबै हुन सक्छन् । त्यसैले कलियुगका अर्जुन नामधारीहरु सबैले असन्तुष्टी सुनाउनु मुर्खता नबनोस । लेखकको न्वारनमा पुरेतले राखिदिएको नाम नै पहिचान खुल्ने कागजपत्रमा छ । चाहेको पहिचानमा प्रस्तुत हुन सिकाउने मिडियामाथि नै विश्वासको खडेरी छ ।
विश्वासको खडेरीमा अर्जुनका दुई परिवारको मिलन हुन अति आबश्यक छ । त्यो मिलन विन्दू भनेको एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्नु हो । अमेरिकी सहयोग नियोगले नेपालमा यसैको नाममा परियोजना संचालन गरिरहेको छ । त्यही देशमा उपचार गर्न जादाँ परिवारको कुनै एक सदस्यले स्वीकार गरेन भने नगर्नुको कारण खोज्ने क्षमता अभिभावकसँग हुनु पर्छ ।
मिलन बिन्दू भनेको नै द्धन्द्ध अन्त्य गर्ने हो । महिनाको ८ सय रुपैयाँ तलव हुँदा १६ हजार रुपैयाँ ऋृण थियो भन्ने सुनाउनेले पनि पारिवारिक कलह अन्त्य गर्ने बाटो रोज्नु पर्ने देखिन्छ । सानीआमाबाट न्याय हुन्छ कि भन्ने आशा छ । विश्वास पनि छ सानीआमाको । उहाँको प्रस्ताव प्रष्ट आए आभारी हुने थियौ भन्ने पारिवारिक आवाज सुनिएको छ ।